Uyenza njani imifanekiso enefuthe lokuvezwa kabini kwiPhotoshop | Abadali be-Intanethi
Uyenza njani imifanekiso yokuvezwa kabini kwiPhotoshop
Lola ifani | | Izixhobo zoYilo, Photoshop
El isiphumo sokuvezwa kabini sikuvumela ukuba unike uchuku lobugcisa kwaye ilayishwe ngentsingiselo kwifoto. Siye sakwazi ukuyibona, umzekelo, kwi-header yochungechunge olufana Ndiyaphila (RTVE) okanye Umtsalane oyinyaniso (HBO). Ijongeka ilungile, kangangokuba ungacinga ukuba intsonkothe ​​kakhulu ukuyenza, kodwa hayi, lungelelanisa kwaye ubeke ingqalelo kulandelelwano lweeleya. Kule post ndiyachaza, inyathelo ngenyathelo, Uyenza njani imifanekiso enesiphumo sokuvezwa kabini kwi-photoshop Uvavanye!
1 Khetha isihloko, ukhetho oluchanekileyo kwaye wenze imvelaphi
2 Ngenisa umfanekiso wesibini, kopisha imaski kwaye utshintshe indlela yokudibanisa
3 Susa amabala amancinci kwaye uphinde "umaleko 1"
4 Guqula i-opacity «ungqimba 2» kwaye uphucule ukubonakala kobuso
5 Yongeza ubomi kumfanekiso, unike uchuku lokugqibela
6 Lungisa isakhelo kwaye udibanise iileya
Khetha isihloko, ukhetho oluchanekileyo kwaye wenze imvelaphi
Inkcazo yangaphambili: Ukuba usebenzisa umfanekiso wombala, yehlisa i-saturation ukuya phezulu (ungakwenza oku ngokuya kumfanekiso wethebhu > uhlengahlengiso > desaturate).
Into yokuqala esiza kuyenza yile khetha intombazana. Ungasebenzisa i isixhobo “sokhetha isihloko”, yeyona ikhawulezayo. Kukho iqhinga, leli endilisebenzisileyo apha, elikuncedayo yenza ukhetho olufanelekileyo (Ndiyishiya kule link) Nje ukuba umxholo ukhethiwe, siya kukhetha ithebhu, siya kukhangela ukhetho "guqula" kwaye siya kwenza isivumelwano malunga nokhetho malunga ne-2 px ukuphepha ukusishiya nehalo.
Ngoku sifuna yenza imaski yomaleko, ukucofa isimboli ebonakala iphawulwe kwaye iboniswe ngenombolo «1» iya kwenziwa ngokuzenzekelayo. Ukucofa imaski, ngebrashi, siya kulungisa iziphene ezithile, umzekelo ummandla wempumlo, kwaye siya kuphelisa iinkcukacha ezingafaki nantoni na kuyilo esinalo engqondweni, njengenxalenye eseleyo yomgexo. Kwakhona kususa iintsalela zeenwele eziye zashiywa phezulu. Khumbula ukuba ngombala omnyama siyawugubungela kunye nomhlophe sishiya uluhlu olubonakalayo. Ekugqibeleni, cinezela umyalelo + T (Mac) okanye ulawulo + T (Windows), ukuze hambisa i-cape kwaye unqande ilokhwe ukuba ingabonwa yentombazana Siza kubiza olu luhlu "umaleko 1".
Siya ku yenza imvelaphi, ungayinika umbala oyifunayo, ndikhethe ukugcina imvelaphi emhlophe. Ukuyidala, cofa uphawu oluvela kumfanekiso ongasentla kunye nenombolo "2", khetha umbala ofanayo kunye nefestile iya kuvula ukuba unqume umbala. Siya kulubiza olu luhlu "imvelaphi".
Ngenisa umfanekiso wesibini, kopisha imaski kwaye utshintshe indlela yokudibanisa
Ixesha lokuba ngenisa ngaphandle umfanekiso esiza kudibanisa ngawo ifoto yentombazana Ndikhethe le landscape, ngesiqhelo ngolu hlobo loyilo ukutshona kwelanga kuhle kakhulu. Ungayitsala ngokuthe ngqo kwaye iya kongezwa njengomaleko omtsha, qiniseka ukuba injalo phezu kwe " umaleko woku-1" kwaye uyinike igama "imbonakalo-mhlaba«. yehlisa i-opacity Umaleko, ukwazi ukubona "umaleko 1", kwaye ucinezele umyalelo + T (Mac) okanye ulawulo + T (Windows), yishukumise kwaye utshintshe imilinganiselo yayo ukuze ibe ngokuthanda kwakho (ukuba uyakwandisa okanye ukunciphisa ubukhulu bayo, khumbula ukucofa iqhosha lokukhetha, ukuba usebenza kwi-Mac, okanye i-alt, ukuba uneWindows, ukunqanda ukuyonakalisa).
Hayi Orale siya kubuyisela i-opacity yayo yokuqala (100%) kwaye sisebenzise ikopi yemaski yomaleko kuyo ukuba sidale "kumaleko 1", kuya kufuneka ucofe kuyo kuphela kwaye, ubambe inketho (Mac) okanye i-alt (Windows) isitshixo, yitsalele "kumaleko we-landscape". Kwakhona siya kuguqula indlela yokudibanisa. Khetha enye oyithandayo, kuxhomekeke kwisitayile ozimisele ukusifezekisa, ndincoma: ukukhanya okuthambileyo, ukukhanya okuqinileyo okanye ukugqwesa. Ndiye ndakhetha ukukhanya okunamandla kuba ndingathanda ukuba imibala yokutshona kwelanga igcinwe.
Susa amabala amancinci kwaye uphinde "umaleko 1"
Uyayikhumbula landawo yentamo endayisusayo? Ndenze ngenxa yokuba i-rhinestones kwi-necklace imaski i-landscape, siya kuyisusa. Yiya kumaleko we-"layer 1" kwaye ukhethe ibrashi. Guqula useto kwibar yeenketho zesixhobo, khetha ibrashi ethambileyo engqukuva, yenza ubungakanani obukhulu kakhulu kwaye wehlise i-opacity ukuya kuma-25%. Siya ku cofa kwi-necklace ide ithi shwaka kodwa ngaphandle kokuqaphela amanxeba okanye amabala angaqhelekanga. Yenza okufanayo kwindawo esezantsi yendlebe, ebumnyama kakhulu kwaye igqume kakhulu imbonakalo yomhlaba. Xa ugqiba phinda umaleko woku-1, uyinike igama umaleko wesi-2 kwaye uyibeke phezulu.
Guqula i-opacity «ungqimba 2» kwaye uphucule ukubonakala kobuso
Masinciphise i opacity of "layer 2" kwi-25%. Ukuphucula ukubonakala kobuso, siya kwimaski ye "landscape" kunye nebrashi emnyama esetyhula. siya kupeyinta ukuze iimpawu zibonakale ngcono yentombazana
Yongeza ubomi kumfanekiso, unike uchuku lokugqibela
Into esinayo ukuza kuthi ga ngoku sele ilungile, kodwa masiyinike okokugqibela ukuze isiphumo sigqibelele. Fihla zonke iileya, kuquka iimaski, thabatha "i-landscape" umaleko. Ukwenza imaski eyisigqubuthelo ingabonakali, cofa kuyo kwaye ucinezele iliso elibonakala liphawulwe kumfanekiso ongentla. Ngesixhobo sokukhetha osikhethileyo, ndisebenzise isixhobo sokukhetha into, khetha kwiintaka ezihlala esibhakabhakeni, khuphela kwaye uzincamathisele kuluhlu olwahlukileyo esiza kuyibeka phezulu. Qinisekisa ukuba awuyishiyi i-halo xa usenza ukhetho lwakho kuba luya kubonakala. Kuloo maleko mtsha, kunye neentaka, Siza kusebenzisa imowudi yokuxuba efanayo njengembonakalo yomhlaba kwaye siya kuthoba i-opacity ukuya kwi-80% ukuze ithoni ifane kangangoko kunokwenzeka. Ungahambisa umaleko kwaye ubeke iintaka naphi na apho ufuna khona, ukuba uhlala unayo enye eseleyo unokwenza imaski yomaleko kwaye uwagubungele ngomnyama njengoko besenzile ngaphambili.
Ukuba ubeka ingqalelo, ezinye iintaka ziya kunqunyulwa, okanye awuyi kuyithanda indlela abakhangeleka ngayo. Cngeplagi yeclone ungazicima. Isampulu nje ngokucinezela iqhosha lokukhetha kwaye upeyinte ngononophelo into ofuna ukuyicima.
Lungisa isakhelo kwaye udibanise iileya
Mhlawumbi, xa ukongeza iintaka umfanekiso awuzange ulungiswe kakuhle, kunye nesixhobo sezityalo ungatshintsha isakhelo. Le yindlela umfanekiso wethu onokuthi ujonge ngayo kunye nesiphumo sokuvezwa kabini.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » Izixhobo zoYilo » Uyenza njani imifanekiso yokuvezwa kabini kwiPhotoshop
Ukwenziwa njani ukuma kwemagazini
Uzenza njani iileta zegothic